Wed, Jul 8, 2020 at 3:22pm
टी–२० विश्वकप क्रिकेट : मलेसियाले नेपाललाई दियो ८४ रनको लक्ष्य
काठमाडौं, ८ साउन । टी–२० विश्वकप क्रिकेटको एसिया फाइनलमा वर्षाका कारण ९ ओभरमा छोट्इएको खेलमा मलेसियाले नेपाललाई ८४ रनको लक्ष्य दिएको छ । मलेसियाले ९ ओभरमा ७ विकेट गुमाएर ८३ रन बनायो । उसका सफिक शरीफले १५ बलमा ३० रन बनाए भने भिरनदीप सिंहले २१ रन जोडे । अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् ।..
आइसिसी टी–२० विश्वकप छनोट : नेपाललाई मलेसियाविरुद्धको खेल चुनौतीपूर्ण
काठमाडौँ, ७ साउन आईसीसी टी-ट्वान्टी विश्वकप छनोट अन्तर्गतको एसिया फाइनलको पहिलो खेलमा नेपाल कतारसँग पराजित भयो । पराजित भएको नेपालका लागि बुधबार हुने मलेसियाविरुद्धको खेल चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। कप्तान पारस खड्का घाइते छन् भने पहिलो खेलमा हारेको नेपाललाई विश्व छनोटमा पुग्न मलेसियालाई हराउने पर्ने दबाब छ। कप्तान खड्का मंगलबार कतारविरुद्ध ४ विकेटले हारेको खेलमा घाइते भएका थिए। कम्मर दुखेका कारण पारस कतारविरुद्ध दोस्रो..
पहिलो खेलमा नेपाल कतारसँग पराजित हुनुको मुख्य ४ कारण
काठमाडौं, ७ साउन आईसीसी टी-ट्वान्टी विश्वकप छनोट अन्तर्गतको एसिया फाइनलको पहिलो खेलमा नेपाल कतारसँग पराजित भयो । ईण्डियन एसोसियसन क्रिकेट मैदानमा मंगलबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल कमजोर प्रतिद्वन्दी कतारसँग ४ विकेटले पराजित भएको थियो । कमजोर प्रतिद्वन्दीको रुपमा हेरिएको कतारसँग पराजित भएसँगै नेपाली टोलीको आलोचना समेत भएको छ । नेपाल कतारसँग पराजित हुनुको मुख्य कारणहरु यस प्रकार रहेको छ । १. टस जितेर ब्याटिङ रोज्नु नेपाली..
टी–२० श्रृङखला : वेष्ट इण्डिज छान्यो १५ सदस्यीय क्रिकेट टोली
एजेन्सी, ७ साउन । भारतसँगको टी–२० श्रृङखलाका लागि वेष्ट इण्डिजले १५ सदस्यीय क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ । आगामी अगस्ट ३ बाट सुरु हुने कार्लोस वार्थवेटलाई कप्तानको जिम्मेवारी दिइएको टोलीमा अनुभवि खेलाडी कायरन पोलार्ड र सुनिल नारिनलाई पनि समावेश गरिएको छ । सुनिलले २२ महिनापछि टि–२० टोलीमा स्थान बनाएका हुन् । २०१७ सेप्टेम्बर १६ मा इंग्ल्याण्डविरुद्धको खेलपछि उनी राष्ट्रिय टोलीमा समावेश भएका थिएनन्..
नेपालको हारबारे के भन्छन् पुर्वकप्तान विनाेद दास ?
काठमाडौंं, ७ साउन । आईसीसी २०-२० विश्वकप क्रिकेटअन्तर्गत एसियाली क्षेत्रको अन्तिम चरणको छनोट प्रतियोगितामा नेपाल कतारसँग ४ विकेटले पराजित भएको छ । १२३ रनको सामान्य चुनौती लिएर जवाफी ब्याटिङ गरेको कतारले ४ बल बाँकी हुँदै १२४ रन बनायो । सुरुआत उत्कृष्ट तर मध्यक्रममा ब्याट्सम्यानको कमजोरीका कारण नेपाल आईसीसी टि–ट्वान्टी विश्वकप एशिया छनोटमा कतारसँग स्तब्ध भएको हाे । टस जितेर कप्तान पारस खड्काले ब्याटिङ..
नेपालले कतारलाई दियो १२३ रनको चुनौती
काठमाडौँ, ७ साउन । आईसीसी २०/२० विश्वकप क्रिकेटअन्तर्गत एसियाली क्षेत्रको अन्तिम चरणको छनोट प्रतियोगिता नेपालले कतारलाई १२३ रनको चुनौती दिएको छ । सिंगापुरको इन्डियन एशोसिएट मैदानमा जारी खेलमा टस जिते ब्याटिङ रोजेको नेपालले १२२ रन बनायो । ओपनिङ जोडीकारुपमा कप्तान पारस खड्का र उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले क्रमशः २८ र २३ रन बनाए । दिपेन्द्र सिंह ऐरीले नेपालका लागि सर्वाधिक ३४ रन बनाए..
आईसीसी टि-२० विश्वकप छनौट : कतारविरुद्धको खेलमा नेपालका ४ खेलाडी पुरानै
काठमाडौँ, ६ साउन आईसीसी टि-२० विश्वकप छनौट (एसिया फाइनल) प्रतियोगितामा नेपालले मंगलबार कतारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। सिंगापुरमा भइरहेको प्रतियोगितामा कतारले मंगलबार दोस्रो खेल खेल्दा नेपालका लागि पहिलो खेल हुनेछ। सोमबार भएको उद्‌घाटन खेलमा कतारलाई आयोजक सिंगापुरले ३३ रनले पराजित गरेको थियो। उपाधि जितेर विश्व छनोटमा पुग्नका लागि नेपाललाई कतारविरुद्धको पहिलो खेल महत्वपूर्ण छ। मंगलबारको खेलमा नेपालको ओपनिङमा कप्तान पारस खड्का आउने प्रवल सम्भावना छ। उनले अघिल्लो..
मंगलबार नेपालले कतारसँग खेल्दै, यस्तो छ 'हेड टु हेड'
काठमाडौँ, ६ साउन आईसीसी टि-२० विश्वकप छनौट (एसिया फाइनल) प्रतियोगिता सिंगापुरमा सोमबार सुरु भएको छ। आयोजक सिंगापुर सहित प्रतियोगितामा नेपाल, मलेसिया, कुवेत र कतार गरि ५ टोलि सहभागी रहेका छन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले आफ्नो पहिलो खेल मंगलबार कतारसंग खेल्नेछ। नेपालको पहिलो खेल – कतारसंग, खेल समय : मंगलबार ७:१५ बजे विहान ( नेपाली समय ) , इन्डियन एसोसिएसन मैदान, सिंगापुर , नेपालको आगामी..
विश्वकप फाइनलमा आफूबाट गल्ति भएको अम्पाएर धर्मसेनाद्वारा स्वीकारोक्ति
काठमाडौँ, ६ साउन इंग्ल्याण्डमा सम्पन्न १२ औं संस्करणको आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा आफूबाट गल्ति भएको अम्पाएर कुमार धर्मसेनाले स्वीकार गरेका छन् । लर्ड्समा इंग्ल्याण्ड र न्युजिल्याण्डबीचको फाइनल खेलको अन्तिम ओभरको चौथो बलमा इंग्ल्याण्डले ओभर थ्रोका कारण ६ रन प्राप्त गरेको थियो । उक्त ओभरमा थ्रो मार्फत एक अतिरिक्त रन अम्पाएरको गल्तीका कारण भएको थियो । सोहि एक रनका कारण इंग्ल्याण्ड र न्युजिल्याण्डको..
टी–ट्वेन्टी विश्वकप छनोट : कतारविरुद्ध पारसले ओपनिङ गर्ने, पहिलो खेलमा सिंगापुर विजयी
काठमाडौं, ६ साउन । सिंगापुरमा सोमबारबाट सुरु भएको आईसीसी टी–ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत एसियाली छनोट प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा सिंगापुले जित हात पारेको छ । सोमबार बिहान भएको खेलमा सिंगापुरले कतारमाथि ३३ रनको जित निकालेको हो । सिंगापुरको इन्डियन एशोसिएट मैदानमा भएको खेलमा सिंगापुरले टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको थियो । पहिले ब्याटिङ गरी सिंगापुरले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १८६ रन बनाएको..
काठमाडौँ, ५ साउन आइसिसी टी-२० विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा आफ्नो स्थान बनाउन कुवेत, सिंगापुर, मलेसिया, नेपाल र कतारबीच सोमबारदेखि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सिंगापुरमा साउन १२ सम्म हुने टी-२० विश्वकप एसिया छनोटको च्याम्पियन टिमले युएईमा हुने विश्व छनोट प्रतियोगितामा स्थान बनाउनेछ। टी–२० विश्वकप छनोटमा १४ टिमबीच विश्वकप छनोटमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। १४ टिम मध्ये शीर्ष ६ टिम आगामी वर्ष अस्ट्रेलियामा हुने आइसिसी टी-२० विश्वकपमा छानिनेछन्। सिंगापुरमा..
जर्मन क्लब बायर्नसँग हार्यो रियल म्याड्रिड
काठमाडौँ, ५ साउन इन्टरनेसनल च्याम्पियन्स कप फुटबलमा स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिड जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखसँग पराजित भएको छ । आइतबार बिहान भएको खेलमा बायर्नले रियललाई ३–१ गोलले हरायो । बायर्नको जितमा कोट्रिन टोलिस्सोले १५औं, रोबर्टो लेवान्ड़ोस्कीले ६७औं र सेर्गी गनाब्रीले ७० औं मिनेटमा गोल गरे । रियलका लागि रोड्रिगोले ८५औं मिनेटमा सान्त्वना गोल फर्काएका थिए । बार्यन ८१औं मिनेटमा १० खेलाडीमा समेटिएको थियो..
तिनवटै फरम्याटका लागि भारतीय टोलीको घोषणा, धोनीको ठाउँमा रिसब पन्त !
काठमाडौँ, ५ साउन भारतले वेष्ट इन्डिजसँग हुने टेष्ट, एकदिवसीय र ट्वान्टी–ट्वान्टी सिरिजका लागि छुट्टा–छुट्टै टोली घोषणा गरेको छ । आइतबार घोषणा गरेका तीनै टोलीको कप्तानी विराट कोहलीले गर्नेछन् । महेन्द्रसिंह धोनी नरहेको टोलीमा हार्दिक पाण्डेयलाई आराम दिइएको छ भने जसप्रित बुम्रराहलाई टेष्ट टोलीमा मात्र समावेश गरीएको छ । बीसीसीआईले सार्वजनिक गरेको टेष्ट टोलीमा कप्तान विराटसँगै मङ्यक अग्रवाल, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्या रहाने,..
पुलिसलाई हराउँदै ब्रिग्रेड ब्वाइज च्याम्पियन
काठमाडौँ ५ साउन ललित स्मृति कप यू–१८ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगितामा ब्रिग्रेड ब्वाइज क्लबले विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गर्दै उपाधि हात पारेको छ । ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको खेलमैदानमा आज भएको फाइनल खेलमा ब्रिग्रेड ब्वाइजले विभागीय टोली पुलिस क्लबलाई १–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै उपाधिमाथि कब्जा जमाएको हो । यस उपाधिसहित ब्रिगे्रड ब्वाइजले लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेको छ । ब्रिग्रेड ब्वाइजको..
काठमाडौँ, ५ साउन बेलायतका हक्की खेलाडीले नेपालमा हक्की खेलको विश्व कीर्र्तिमान कायम गरेका छन् । बेलायती हक्की खेलाडी टोलीले विश्वकै सबैभन्दा बढी उचाइको भूमि अर्थात् पाँच हजार २० मिटर उचाइमा अवस्थित मुस्ताङको थोरङलामा हक्की खेलेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेको हो । बेलायतबाट आएका ३४ जना व्यावसायिक हक्की खेलाडीमध्ये ३१ जनाले थोरङ्लामा हक्की खेलेका थिए । उनीहरुले यही जुलाई १६ तारिखका दिन एक..
टेष्ट, एकदिवसीय र ट्वान्टी–ट्वान्टीका लागि भारतीय टोली घोषणा, को-कोले पाए मौका !
एजेन्सी, ५ साउन । आइतबार भारतले वेष्ट इन्डिजसँग हुने टेष्ट, एकदिवसीय र ट्वान्टी–ट्वान्टी सिरिजका लागि छुट्टा–छुट्टै टोली घोषणा गरेको छ । महेन्द्रसिंह धोनी नरहेको टोलीमा हार्दिक पाण्डेयलाई आराम दिइएको छ भने जसप्रित बुम्रराहलाई टेष्ट टोलीमा मात्र समावेश गरीएको छ । आइतबार घोषणा गरेका तीनै टोलीको कप्तानी विराट कोहलीले गर्नेछन् । महेन्द्रसिंह धोनी नरहेको टोलीमा हार्दिक पाण्डेयलाई आराम दिइएको छ भने जसप्रित बुम्रराहलाई टेष्ट..
यता निशमले सुपर ओभरमा छक्का हाने, उता कोचले अन्तिम सास फेरे
काठमाडौँ, ३ साउन खेलको हारजित अक्सौर हाँसो र आँशु बनेर पोखिन्छ। यस पटकको विश्वकप क्रिकेट फाइनल रोमाञ्चको चरमबिन्दुमा नै पुग्यो। ५० ओभरको खेलमा बराबरी भएपछि खेलिएको सुपर ओभरले पनि विजेताको छनौट गर्न सकेन। बाउण्ड्रीका आधारमा इङ्ल्याण्डले उपाधि जित्यो। यस सुपरओभरमा खेल बराबरी मात्र भएन यसै ओभरमा न्युजिल्याण्डका जिमी निशमका स्कूले गुरू तथा कोच डेभ गोर्डनले अन्तिम साससमेत फेरे। सुपर ओभरमा इङ्ल्याण्डले पहिले ब्याटिङ गर्दै..
फुटबल विशेष : यी हुन् प्रि–सिजनका उत्कृष्ट ५ क्लब, अफ्रिका कपको फाइनल खेल आज
एजेन्सी, ३ साउन । क्लबहरुको लिग सञ्चालन हुनुभन्दा पहिले अर्थात प्रि–सिजनमा केही उत्कृष्ट क्लबको मैत्रीपूर्ण खेलहरु हुँदैछन् । विश्व फुटबलका सबै खाले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । कोपा अमेरिका, दि नेसन्स युरो क्वालिफायर्स, यू–२० युरोस र महिला विश्वकप जस्ता प्रतियोगिताहरु सकिइसकेका छन् । अफ्रिका कपको फाइनल खेल आज राति हुँदैछ । स्पेनिस, इटालियन, फ्रान्सेली लिगहरुको ड्र पनि सार्वजनिक हुने अवस्थामा छ..
नेपाल क्रिकेट सङ्घको निलम्बन यथावत्, किन भएन छलफल ?
काठमाडौँ, ३ साउन । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी) ले नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)को निलम्बन यथावत् नै राखेको छ । इङ्गल्याण्डको लण्डनमा बिहीबार बसेको आइसिसीको बोर्ड बैठकले क्यान निलम्बन फुकुवाका बारेमा कुनै छलफल गरेन । आइसिसीले क्यानमा सरकारी हस्तक्षेप बढेको भन्दै नेपाललाई विसं २०७३ वैशाख १३ गते निलम्बन गरेको थियो । त्यसयता बारम्बार फुकुवाको प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन । आइसिसीको प्रतिबन्धमा..
आईसीसीद्वारा जिम्बावे क्रिकेट बोर्ड निलम्बन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि खेल्न नपाउने
एजेन्सी, ३ साउन । जिम्बावे क्रिकेट बोर्ड निलम्बन भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले टेष्ट मान्यता पाएको राष्ट्र जिम्बावे क्रिकेट बोर्डलाई सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै निलम्बन गरेको हो । सरकारी हस्तक्षेप बढेको भन्दै आइसीसीले जिम्बावेसहित क्रोएसिया र जाम्बियालाई पनि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । आइसीसीले निलम्बनसँगै सबै अनुदान समेत रोक्का गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता समेत खेल्न नपाउने जनाएको..
जोफ्रा आर्चरले निकै ठूलो मानसिक पीडामा विश्वकप खेलेको खुलाशा
काठमाडौँ, २ साउन आइसीसी क्रिकेट विश्वकप २०१९ मा इङ्गल्याण्डलाई विश्वकप जिताउन जोफ्रा आर्चरको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । आर्चरले आफ्नो ‘फास्ट बलिङ’ को दममा ११ म्याचमा २० विकेट हाँसिल गरे । उनी इङ्गल्याण्डका सबैभन्दा सफल बलर प्रमाणित भए । यद्यपि, इङ्गल्याण्डको च्याम्पियन बनेपछि उनीबारे केही कुरा खुलासा भएको छ । विश्वकपको पहिलो म्याचको भोलिपल्ट जोफ्रा आर्चरका काकाको छोराको बारबाडोसमा हत्या भएको खुलासा भएको छ..
रङ्गशालाको डिपिआर तयार, १५ लाख बजेट विनियोजन
दमौली, २ साउन । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ ढोरफिर्दीमा निर्माण गर्न लागिएको रङ्गशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ । नगरपालिकाले नगरको शानको रूपमा घोषणा गरेको रङ्गशालाको डिपिआर तयार भएको हो । ढोरफिर्दीस्थित गाउँफर्कोदय माध्यमिक विद्यालय वरपर रहेको जग्गालाई रङ्गशालाको रूपमा विकास गर्न लागिएको वडाध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यालयको नाममा रहेको १०० रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा रङ्गशाला निर्माण गर्ने..
फिफा बरियताको शीर्ष ३४ भित्र नेपाल, विश्वकप छनोटको समूह ‘बी’मा भिड्ने
काठमाडौं, १ साउन । विश्वकप छनोटको एसियाको दोस्रो चरणको छनोटमा नेपाल समूह ‘बी’मा परेको छ । सन् २०२२ मा कतारमा आयोजना हुने विश्वकपका लागि विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बुधबार निकालेको 'ड्र' अनुसार नेपाल समूह ’बी’ मा परेको हो । एसियाका ४० राष्ट्रलाई आठ समूहमा विभाजन गरिएको छ । एसियाली राष्ट्रमा फिफा बरियताको शीर्ष ३४ भित्र पर्दै नेपालले विश्वकप छनोटको दोस्रो चरण..
आईसीसीको नयाँ वरियता सार्वजनिक, को कति नम्बरमा ?
काठमाडौँ, ३१ असार एकदिवसीय विश्वकप सकिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले नयाँ वरियता सार्वजनिक गरेको छ। वरियतामा विजेता टिमले इंग्ल्याण्ड र उप-विजेता न्युजिल्याण्ड खेलाडीहरुले स्थान सुधार गरेका छन्। प्रतियोगिताकै उत्कृस्ट खेलाडी चुनिएका न्युजिल्यान्ड कप्तान केन विलियमसनले सेमीफाइनलमा भारतसंगको महत्वपूर्ण इनिंग पछि करीयरकै उच्च ७९९ अंक प्राप्त गरेका थिए। इंग्ल्याण्ड अल-राउण्डर बेन स्टोक्स ६ सय ९४ अंक सहित प्रतियोगिता अन्त्य गरेका छन् र उत्कृस्ट २० भित्र..
विश्वकप क्रिकेटको ‘टिम अफ दि टुर्नामेन्ट’ मा को–को परे ?
एजेन्सी, ३० असार १२ औँ संस्करणको एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको ‘टिम अफ दी टुर्नामेन्ट’ सार्वजनिक भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ले सोमबार न्युजिल्यान्डका कप्तान केन विलियम्सनको कप्तानीमा ‘टिम अफ दी टुर्नामेन्ट’ सार्वजनिक गरेको हो । आईसीसीले सार्वजनिक गरेको प्लेइङ इलाभेनमा विश्वविजेता इंग्ल्यान्डका चार, उपविजेता न्युजिल्यान्डका तीन, अष्ट्रेलिया र भारतका समान २-२ तथा बंगलादेशका एक खेलाडी टिममा परेका छन् । टिममा कप्तान विलियम्सनसँगै जेसन रोय,..
यस्ताे छ ग्रीजम्यानले १७ नं जर्सी रोज्नुको कारण
काठमाडाैं, ३० असार । फ्रान्सेली विश्वकप विजेता एन्टोनी ग्रीजम्यानले बार्सिलोनामा जर्सी नं १७ पाएका छन्। उनी आफैंले जर्सी नंबर १७ रोजेको मार्काले जनाएको छ। ग्रीजम्यानले देशका लागि जर्सी नं ७ लगाउँछन्। उनले एथ्लेटिको मड्रिडमा पनि ७ नंबरकै जर्सी लगाउँथे। त्यस अगाडि रियल सोसियाड्याडबाट पनि उनी ७ नंबरकै जर्सी लगाउँथे। बार्सामा अनुबन्ध भएपछि भने उनलाई ७ नंबरकै जर्सी पाउन मुश्किल थियो। कारण बार्सिलोनामा जर्सी..
कोहलीको साटो रोहितलाई कप्तान बनाउन सकिन्छ : बीसीसीआई
काठमाडौं, ३० असार । क्रिकेट विश्वकपको सेमीफाइनलमा न्युजील्यान्डसँग हारेपछि भारतीय टीममा अनेकौं परिवर्तन गर्न सकिने कुरा उठेकाे छ । बीसीसीआईका एक अधिकारीका अनुसार, विराट कोहलीलाई हराएर रोहित शर्मालाई एकदिवसीय र टी२० को नियमित कप्तान बनाउन सकिने सम्भावना छ । कोहली चाहिँ टेस्टका कप्तान बनिरहन सक्छन् । आईएएनएस समाचार संस्थासँग कुराकानी गर्दै एक अधिकारीले बताए, ‘टीमलाई झन् राम्रो बनाउन परिवर्तनको प्रक्रिया छिट्टै शुरू गरिनेछ..
इंग्ल्याण्डलाई विजेता घोषणा गर्ने नियमको आलोचना, गौतम गाम्भिरको 'गम्भीर' जवाफ
३० असार, काठमाडौं । एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटअन्तर्गत फाइनल खेल त इंग्ल्याण्डले जित्यो, तर प्रशंसा न्यूजिल्याण्डको पनि भइरहेको छ । एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट २०१९ को उपाधि इंग्ल्याण्डले आफ्नो नाममा गरिसकेको छ । फाइनलको अति रोमाञ्चक खेलमा इंग्ल्याण्डले न्युजील्याण्डलाई हराएको हो । टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्न उत्रेको न्युजिल्याण्डले आठ विकेट गुमाएर २४१ रन बनायो । जवाफी ब्याटिङ गरेको इंग्ल्याण्डले पनि पूरा ५०..
इङ्ल्यान्ड नयाँ विश्व विजेता, न्युजिल्यान्ड सुपर ओभरमा पराजित
काठमाडौँ, २९ असार । इङ्ल्यान्ड आईसीसी क्रिकेट एकदिवसीय विश्वकप - २०१९ को नयाँ च्याम्पियन बनेको छ । आइतबार लन्डनमा भएको उपाधि भिडन्तमा न्युजिल्यान्डलाई सुपर ओभरमा पराजित गर्दै इंग्ल्यान्ड पहिलो पटक च्याम्पियन बनेको हो । सुपर ओभरमा पहिले ब्याटिङ गरेको इंग्ल्यान्डले १५ रन जोड्यो। इंग्ल्यान्डका लागि बेन स्टोक्स र जोस बटलरले ब्याटिङ गरेका थिए भने न्युजिल्यान्डका ट्रेन्ट बोल्टले बलिङ गरेका थिए। स्टोक्सले १ चौका सहित..
नेपालले मलेसियाविरुद्द सिरिज जित्दा के-के रेकर्ड बने ?
काठमाडौं, २९ असार अन्तर्राष्ट्रिय दोस्रो टी-२० क्रिकेट अन्र्तगत नेपालले मलेसियालाई ६ रनले पराजित गर्दै श्रृंखला क्लीन स्वीप गरेको छ । पहिलो टि-२० ७ विकेटले जितेको नेपालले दोश्रो टि-२० मा ६ रनको रोमान्चक जित निकाल्यो। यस खेलको क्रममा बिभिन्न रेकर्डहरु बनेका छन्, हेर्नुहोस् – १. सिरिज क्लिन स्विप नेपालले टि-२० अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको सबै खेल जित्दै क्लिन स्विप गरेको यो पहिलो पटक हो। नेपालले यस..
Results 1926: You are at page 18 of 65